Aqoonkaab Timo daadasho | Aqoonkaab
Sep 05, 2016Caafimaadka
Timuhu waxay ka samay san yihiin nooc borotiin ah oo loo yaqaan keratin kaasoo laga soo daayo daldalooda yar yar ee timuhu kasoo baxaan. Marka daldalooladan yar yar ay soo saaraan unugyo cusub oo timo ah, kuwii hore banaanka ayaa loo saarayaa si kuwa cusub boos loogu helo.
Madaxa qofka wayn wuxuu leeyahay ugu yaraan 100,000-150,000 waxaana maalin kasta luma ilaa 100 kamid ah timahaas. Koritaanka timaha ee qofku wuxuu leeyahay isbadal joogto ah oo ku xidhan da’da qofka, xanuun, iyo qodobo kale.
Noocyada isbadalka timaha
Anagen:waa nooc timuhu si firfircooni ah u korayaan wuxuuna koriinkaas soconayaa 2-6 sano
Catagena:koriin kumeel gaadh ah oo soconaaya 2-3 isbuuc
Telogen:waa nooc nasasho ah oo wax isbadal ah dhacayn balse dhamaadka noocan dhamaan timihii hore waxaa badalaya kuwo cusub.
Noocyda tima daadashada
Xaalad dabiici ahtaasoo timuhu si tartiib ah u khafiifayaan marka dadku duqoobaan. Heerka koritaanka timaha ayaa yaraanaya timaha madaxa ku yaalana way yaraanayaan wayna gaa gaa banayaan.
Xaalad la iska dhaxli karotaasoo ragga iyo dumarkaba ku dhacda. Xaalada noocan oo kale ah markay ragga asiibto waxaa loo yaqaan bidaar rageed (male pattern baldness), waxayna raga ku dhacdaa ayagoo yar yar qiyaas ahaan 20 sano jirada. Calaamadaha lagu yaqaan waxaa kamid ah qaybta kore ee wajiga iyo dhakada sare ee madaxa oo timuhu ka yaraadaan. Sidoo kale dumarkana way ku dhacdaan xaaladan (female pattern baldness) balse dumarku isbadal wayn ma dareemaan ilaa ay ka gaadhaan da’da 40 jirka ama kadib. Dumarku markay da’daan gaadhaan waxaa ka daata timaha dhakada sare ee madaxa oo dhan.
Xaalad si lamafilaanah ku bilaabata waxayna sababtaa in timuhu si teel teel ah uga daataan madaxa, badanaa waxay xaaladan asiibtaa caruurta iyo dhalinyarada. Xaaladan waxay sababi kartaa timaha oo gabi ahaanba daata balse 90 boqolkiiba dadka ay ku dhacdo timuhu dib ayay ugu soo baxaan dhawr sano kadib.
Xaalad qariib ahwaxayna sababtaa in timaha jirka oo dhan ay daataan sida suuniyaha, timaha bisqinta ama shiciirada iyo timaha baalasha indhaha.
Xaalad khatar ahoo timuhu si joogto ah u daadanayaan waxaana sababa caabuq ku yimaada maqaarka iyo noocyo kale oo caabuq ah sida dhaawac soo gaadha maqaarka oo sababa in unugyada timaha sameeyaa ay awoodi waayaan in ay timaha dib usoo saaraan.
Maxaa sababa tima daadashada:
Khuburada caafimaadku ilaa hada ma cadayn sababta dhabta ah ee ka danbaysa tima daadashada balse waxaa jira qodobo badan oo loo sababayn karo timaha oo daata.
Cadadka dhecaanka Hormoonka androgensoo kordha wuxuu sababaa bidaarta ragga.
Dhaxaal ahaan waa la iskugu gudbin karaa tima daadashada.
Dawooyinka qaarkood way sababaan tima daadashada sida kuwa loo isticmaalo dawaynta cudurka kansarka sidoo kale dawooyinka lagu yareeyo cadaaadiska dhiigaway sababi karaan sida dawooyinka lagu yareeyo dhalmada ayaguna way sababi karaan.
Gubashada, dhaawaca iyo raajadabu waxay sababi karaan in si kumeel gaar ah timuhu u daataan.
Habka difaaca jidhku wuxuu ka qayb qaadan karaa tima daadashada waliba wuxuu sababaa nooca loo yaqaan alopecia areata.
Isqurxinta badan way ka qayb qaadataa daadashada timaha. Shaambooga oo si xad dhaaf ah loo isticmaalo, iyo noocyada kale ee timaha lagu qurxiyo waxay qayb wayn ka qaataan tima daadashada hadii si xawli ah loo isticmaalo.
Waxaa jira xaalado caafimaad oo keeni kara tima daadashada sida, nafaqa darada, thyroid disease, cuntada oo si khaldan loo cuno, sonkorowga, dhiig la,aanta. Dhamaan xaaladahaas iyo kuwo kaloo badan waa kuwo keeni kara tima daadashada balse maahan khasab inay keenaan
Qore: cabdilaahi cabdi muuse (shicib)
Previous PostBakooro (Glaucoma) Next PostTeleefanka cusub ee samsung note 7 oo cilladi haleeshay